Fa maninona ianao no mitoraka bilaogy? | Martech Zone
Fa maninona ianao no mitoraka bilaogy?
Alatsinainy, Jolay 31, 2006 Talata, Oktobra 4, 2011 Douglas Karr
Tiako ny mitady sy mampita vaovao. Manana fianakaviana, namana, mpiara-miasa ary mpanjifa marobe aho izay mangataka ny hevitro ary tiako omena azy ireo izany. Mampalahelo fa manana fanontaniana maro kokoa aho ary maro ny olona mila fanampiana, na izany aza, ka indraindray na ny fianakaviako aza dia tezitra fa tsy mamaly.
Saingy, izany is izay mahay ahy.
Tiako ny mihaino.
Tiako ny mamaky.
Tiako ny mianatra.
Ary tiako ny mizara izay nianarako.
Mbola zava-dehibe kokoa aza ny fizarana rehefa diso aho. Ankasitrahako izany rehefa milaza amiko ny olona fa tsy mandeha amin'ny rocker aho. Androany dia niditra tao am-piasana mafy aho momba ny fetran'ny andraikitro sy ny asako. Ny marina, sarotra izany satria tsy tiako ny fetra. Tsy tiako ny ekipako ary miady hevitra momba ny asako sy ny asan'izy ireo aho. Te-hiaraka amina vondrona lohan-doha fotsiny aho hamahana ilay olana tsy mandeha! Dia izay!
Amin'ny fotoanan'ny fihenjanana amin'ny orinasa dia tianay ny mihemotra amin'ny andraikitra sy ny fetra. Tsy mampihomehy ve fa rehefa manangana orinasa iray ianao fa tsy misy ireo fetra ireo? Daka fotsiny ny tsirairay satria izy rehetra manana raha te ho velona izy ireo. Ahoana no hitahirizantsika an'io momentum io raha mitombo ianao manomboka amin'ny 5 ka hatramin'ny 10 ka hatramin'ny 5,000 ny mpanjifa? Heveriko fa iray amin'ny tsiambaratelo itehirizan'ny orinasa lehibe izany. Mba hikolokoloana amin'ny fizotrany, ny taratasy, ny fanondro…. vitao fotsiny! Izay no mahatonga ahy manao bizina fa tsy manao politika. Halako ny politika, indrindra ny politika amin'ny raharaham-barotra.
Ka niantso mafy aho, ary niantsoantso izy ireo, ary mbola niantsoantso mafy koa aho ary nivoaka. Taorian'izay dia tafita izahay. Ekipa tsara kokoa noho izany izahay. Maniry ve aho mba tsy hisy izany? Tsia tsia! Tsy maintsy takatr'izy ireo ny zavatra tsapako sy ny momba ahy mba hahafahanay manao tsara ny asa. Manaja bebe kokoa azy ireo aho noho ny fanosihosena ahy tsy hanao. Ary ankehitriny dia mankasitraka ny fomba fijerin'izy ireo aho.
Te hanana izany adihevitra izany amin'ny olona rehetra aho. Olona tsara kokoa aho rehefa milaza ny teninao amiko. Tsy hiteny aho hoe diso aho na diso ianao… samy manana ny fomba fijerintsika sy ny finoantsika isika. Tsara kokoa izahay amin'ny maha ekipa noho ny fahasamihafana.
Izany no antony anaovako bilaogy!
Afaka manipy ny hevitro amin'ny olona maniry hamaky azy aho. Manana mpamaky roanjato isan'andro aho izao ary isaky ny andro vitsivitsy dia hanipy hevitra na taratasy fohy iray ny iray amin'izy ireo izay mahatonga ahy hieritreritra izay nosoratako. Omaly, ny mpitarika ny orinasa GIS hajaina dia nandefa teny 2 momba ny fidirako farany tao amin'ny Google Maps: "Fampiharana tsara!". Nahavita ny androko io!
Izany no antony anaovako bilaogy.
Manana vondron'olona matoky ahy manodidina aho izay manaparitaka hevitra tsy an-kijanona. Saingy tsy ampy izany. Te-hamoaka ny hevitro amin'ireo olona tsy fantatro aho. Olona ivelan'ny indostria misy ahy, ivelan'ny fireneko, ivelan'ny hazakazako, sns. Tena manao aho! Tsara kokoa isika rehefa mifankahazo. Tsy misy mahasakana antsika.
Ka maninona no mitoraka bilaogy?
Google Map API: Mitadiava, tariho ary havaozy ny toerako
Fitorahana bilaogy amin'ny alàlan'ny loza voajanahary (miseho izao)
1 Aogositra 2006 amin'ny 10:39 PM
Vao nahita an'ity bilaogy ity aho androany ary tsy maintsy milaza aho fa mihevitra aho fa bilaogy tena tsara miaraka amina lahatsoratra tena tsara. Manantena ny hamaky bebe kokoa ny asanao aho!